Inona no hatao raha tsy manana mpamily Windows fotsiny ny fitaovantsika wifi? | Avy amin'ny Linux
Inona no hatao raha tsy manana mpamily Windows fotsiny ny fitaovantsika wifi?
Nanapa-kevitra ny hamaha ity olana ity aho satria lasa malaza any amin'ireo ivon-toeram-pianarana sy any amin'ireo ivon-toeram-piasana ny tambajotra Wi-Fi, fa inona no hatao rehefa manana mpamily ho an'ny Windows fotsiny ny fitaovana Wi-Fi an'ny PC antsika?
Rehefa mitranga amintsika io toe-javatra io dia tsy tokony hatahotra ny mpampiasa Linux, misy ny fampiharana antsoina hoe ndiswrapper izay mamela ny fitaovana hiasa amin'ny mpamily Windows.
Ny fomba anaovana izany amin'ny alàlan'ny Debian 6 sy ny vokariny dia:
1: Atsofohy ilay ndiswrapper
2: Adikao ireo rakitra .INF y .SYS izay tonga amin'ny CD ao anaty fampirimana amin'ny PC ohatra / home / tu_user
3: Apetraho ny mpamily
Hamarino avy eo fa napetraka tsara ny mpamily
Farany apetraho ilay mpamily ndiswrapper
Raha rehefa manatanteraka an'io baiko io dia manome hadisoana milaza fa tsy manana ny modely ndiswrapper izy (matetika no mitranga izany rehefa apetraka amintsika ny kernel bigmem, nitranga tamiko io farany io)
Amin'ity safidy ity dia hamerina hanamboatra ny modely (na mpamily ho an'ny kernel ampiasainay) izahay.
Hanamarina fa mandeha tsara ny fitaovana
ary zavatra toa izao dia tokony hiseho eo amin'ny efijery:
tsy misy extensions tsy misy tariby. eth0 tsy misy fanitarana tsy misy tariby. wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID: off / any Mode: Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power = 20 dBm Andramo indray ny fetra lava: 7 RTS thr: off Fragment thr: off Encryption key: off Power Management: amin'ny pan0 tsy misy extensions tsy misy tariby.
Ankehitriny fa milamina ny zava-drehetra, dia ataontsika ny enta-mavesatra mpamily ndiswrapper rehefa manomboka ny rafitra.
Mba hampavitrika ilay interface tsy misy tariby
Ity farany dia tsy maintsy atao isaky ny manomboka ny rafitra ianao, raha tsy hoe ataontsika mandeha ho azy.
NAOTY: raha manana Linux X64 ianao, ny mpamily dia tsy maintsy ho an'ny maritrano X64 ihany koa
Ny programa ndiswrapper dia natao ho an'ny mpamily fitaovana WIFI tsy misy tariby izay mety ho USB na PCI fa amin'ny antontan-taratasy sasany dia milaza fa izany koa dia azo atao amin'ny winmodems sy fitaovana hafa, tsy nanandrana izany aho ary avelako hisokatra ho an'ny mpamaky.
Ary izao hankafizanao ny tamba-jotra tsy misy tariby, saingy tsy maintsy apetrakao ireo programa hamantarana ireo tamba-jotra ohatra ny Wifi Radar, saingy lahatsoratra iray hafa izany.
Lahatsoratra nalaina avy amin'ny GUTL.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Inona no hatao raha tsy manana mpamily Windows fotsiny ny fitaovantsika wifi?
Hiasa amin'ny Wheezy ihany koa ve ity vahaolana ity?
Tena tsara. Soa ihany fa tsy nanome fanaintainana ahy loatra ny karatra WiFi-ko, NetworkManager ho an'ny Wicd fotsiny no ovako, indrisy fa tsy mandeha amin'ny fomba tsara ireo mpamily.
Misaotra fa hahasoa!
Indray mandeha monja no tsy maintsy narahiko tamin'ity fomba ity, ary niaraka tamin'i Mandriva 2011 aho, ary nandeha mafy aho.
Ny laptop Oktobra 2006 an'ny Sony Vaio dia manana switch ho Wi-fi. Hita fa ny switch toy izany, na amin'ny maodely Sony Vaio na Toshiba, dia korontana mora simba ary manimba ny Wi-fi anao. Tena nampijaly ahy izany!
Vao haingana aho no nividy adaptatera ho an'ny Wifi, maodely DWA-125N avy amin'ny D-Link. Ary ny switch switching dia nanala ny tambajotra tamin'ny alàlan'ny default! Nijaly mafy aho, nefa nahita ny fanamboarana azy.
Amin'izao fotoana izao. Misaotra an'ity adapter Wi-fi ity, afaka mankafy fifandraisana tsy misy tariby tena tsara aho raha tsy mampiasa mpamily fananana, satria ny marika D-Link dia manome mpamily ho an'ny Linux. 🙂
Mahaliana, mitahiry ny info raha ilainao 😀 misaotra betsaka.
Nampiasa an'io safidy io koa aho taloha niaraka tamin'ny broadcom 4318 izay somary mifanipaka amin'ny distros sasany fa ny mpamily izay nekeny dia tokony hifanaraka amin'ny windows xp.
Rehefa mahalala kely kokoa aho izao dia mametraka firmware-b43-installer mampifandray amin'ny alàlan'ny tariby fotsiny aho hampidinana ny fonosana sy voila!
Hmm, mety amin'ny Arch koa ve ity?
Saingy ... misy wifi maoderina HW izay tsy tohanan'ny kernel?
Nila dia hoy izy:
Salama! Fanontaniana haingana fa tsy ao anaty lohahevitra mihitsy izany. Fantatrao ve ny fomba hahatonga ny tranonkalanao ho sariaka? Toa hafahafa ny tranokalako rehefa mijery amin'ny iPhone. Miezaka mitady lohahevitra na plugin mety afaka manamboatra ity olana ity aho.
Raha misy soso-kevitrao, azafady mba zarao.
Valio amin'i Nila
Elav, aiza ianao? Satria tsy manana Facebook, Twitter, na Google+ aho, izany no fomba tokana hieritreretako hifandray aminao.
Nisy zavatra hafahafa nitranga tamiko niaraka tamin'i Thunar: nivoaka ny volomaso! Saingy ny zavatra hafahafa dia nandritra ny fotoana kelikely (tamin'ny herintaona) tsy nanavao na inona na inona tao amin'ny Xubuntu 12.10 aho. Hafahafa tokoa ny fahatsapana, indrindra rehefa manindry ny kodiaran'ny totozy aho.
Afaka manao lahatsoratra momba izany ve ianao?
Misaotra betsaka ary tratry ny taona.
Hahahaha, tena manana volomaso i Thunar? Ohh !! Tsy fantatro hahahaha .. Miala tsiny ry namako, mila mametraka milina virtoaly aho hanohizako ny fanoratana momba ny Xfce satria nofandrihan'i KDE tao amin'ny zohy an'i Conqi aho ary tsy hamela ahy hivoaka ..
Salama Misaotra namaly, Elav. Hey, zavatra hafahafa no mitranga, tsy mivoaka ao Thunar intsony ny volomasoko. Ary mbola misy zavatra hafahafa kokoa: ao amin'ny navigateur Iron ankehitriny dia toa ilay interface YouTube taloha io raha tao amin'ny Firefox no ahitako ilay vaovao. Tsy azoko.
Aza matahotra ny amin'izay nangatahiko taminao. Heveriko fa mitondra anao tontolo vaovao sy mahaliana i KDE. Mbola tsy nomeko azy ny fotoana mety satria ity laptop ampiasaiko ity dia avy amin'ny 2006 ary miaraka amin'i Xfce dia miasa toa manintona izy.
Mandra-pahatongan'ny manaraka! Manantena aho fa hamaky anao indray ato ho ato amin'ny lahatsoratra vaovao.
Eny eny, hafahafa ny zava-drehetra, sa tsy izany? 😕
helvert camacho dia hoy izy:
Salama aho fa vaovao amin'ny linux fa mahazo ny lesoka manaraka aho rehefa mandeha mametaka ny mpamily $ sudo ndiswrapper -i net8192cu.inf
tsy afaka nanokatra net8192cu.inf: Ny fisie na ny lahatahiry ao amin'ny /usr/sbin/ndiswrapper-1.9 tsipika 162 dia tsy misy.
Mamaly an'i helvert camacho